Nhau - Tianjin Wangtong Viwanda Uye Trade Co., Ltd.
Tianjin Wangtong Maindasitiri Uye Trade Co, Ltd. Lifen Zvizoro Fekitori yakanga yakavakwa pamusoro pa1998, ine makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo rwekugadzira zvigadzirwa, tinoita zvigadzirwa zveOEM / ODM uye tine yedu chaiyo brand SIMU munzvimbo yekuchengetedza ganda.
Kuti tigadzirise vatengesi vadiki vazhinji vanoda kusevha mutengo uye vane zvigadzirwa zvakanaka uye pasuru yakanaka panguva imwe chete, yakaderera kwazvo MOQ yakakumbirwa yemhando yega yega yezvigadzirwa neyakavanzika chitaridzi. Kazhinji zana chete pcs. Isu takanga tabatsira vatengesi vadiki vazhinji kukura kubva kudiki kusvika kune hombe. Hazvina mhosva kuti iwe uri wekutengesa hombe kana mutengesi mudiki, isu tinopa iwe wakanaka kwazvo zvigadzirwa zvigadzirwa kwauri.
Isu takagadzira yakachena uye yakasikwa mutsara wezvigadzirwa. Tinotenda kuti runako uye huchenjeri hwechisikigo zvinogona kupa zvigadzirwa zvinoita kuti utaridzike uye unzwe kunaka - izvi zvinoreva kuti tinoramba kushandisa chero zvinowedzerwa zvine chepfu uye zvinomesa ganda-kuita kuti purofiti yedu ive yakakwira nemutengo weganda rako rakanaka.
Panzvimbo iyoyo, tinodhirowa zvinovaka uye runako runosimudzira zvinovaka muviri kubva kuzvirimwa zvakasikwa uye zvakagadzirwa musango. Ipapo isu tinowedzera aya anotora kune aloe vera, shea bata, uye anonyorovesa mafuta ekugadzira edu epamusoro mhando, echisikigo ekuchengetedza ganda zvigadzirwa.
Unogona kuva nechivimbo chekuti chese chinhu chese chatinoshandisa chakachengeterwa zvine mutsigo uye chakasarudzwa zvine hungwaru nezvakanakira ganda. Iyi miunganidzwa yakaoma yakaoma inovaka, inonwisa mvura, inochenesa uye inovhenekera huso. Chimwe chezvakavanzika zvekuita kuti zvigadzirwa zvedu zvibudirire ndeyeye mwedzi-kureba, kudzika-kupisa kupisa nzira. Izvi zvinogadzira mishonga yemakwenzi ine huwandu hwakanyanya hwemavhitamini uye zvinovaka muviri, zvichiita kuti zvigadzirwa zvedu zvishande zvakanyanya. Maitiro echisikigo anoitawo kuti zvigadzirwa zvedu zvive zvakachengeteka kuti munhu wese ashandise, kubva kuvana kusvika kuvakadzi vane nhumbu.
Kana iwe uchingorera ganda rako netambo yedu, riine hutano uye riwedzere kupenya rinozove. Vatengi vedu vakaona kunoshamisa kuvandudzwa uye kugadziridzwa kwemavara avo nekuda kwedu kunovaka, ganda kuenzanisa mafomula. Isu tinofunga mafomura edu kunge anopfuura kungochengeta ganda. Ivo vanotakura zvakapfuma hwema uye zvigadzirwa zvinopa yakasarudzika ruzivo.
Post nguva: Kubvumbi-14-2021